MyLasar.com ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ? - MyLasar.com
လစာစစ်တမ်း MyLasar.com ၏လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ
MyLasar.com သည် ၀ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလုပ်ရာထူးပေါင်း ၆၀၀ ကျော်အတွက် လစာ နှိုင်းယှဥ်ချက်များ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အလုပ်ရာထူး စာရင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်စျေးကွက်မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး စဥ်ဆက် မပြတ် မွမ်းမံလျှက်ရှိသည်။
ယခု လစာ စစ်တမ်း လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ ကို ၂၀၀၇ ခုနစ်က ဆိုဗာကီယား တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်တမ်း အတွက် အချက်အလက်များ ရယူခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်၊ အသုံးပြုခြင်းစသည့် လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ ကို Profesia, spol. s r.o. ကုမ္ပဏီမှရေးသားသည်။ အလားတူ လစာ ပေါ်တယ်များ ဖြင့်အချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းကို ချက်နိုင်ငံ (Platy.cz) နှင့် ဟန်ဂေရီ (Fizetesek.hu) တွင်လည်းတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ၁၆ နိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ နိုင်ငံတကာ ပေါ်တယ် Paylab.com ကိုလည်းတင်ထားသည်။ MyLasar.com သည် Paylab ကွန်ယက်၏နောက်ထပ် အဖွဲ့၀င် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါ်တယ်မှဦးတည်ထားသည့် အလုပ်စျေးကွက် အတွင်းမှလူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့များမှာ မိမိတို့လစာကို နှိုင်းယှဥ်လိုသူများ၊ မိမိ၀န်ထမ်းများအတွက် မျှတသည့် လစာဖြစ်စေရန် စိတ်ပါ၀င်စားမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။
အလုပ်စျေးကွက် မှ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် မိမိတို့လစာကို အခြားမိမိတို့နှင့် တူညီသည့်ရာထူးနှင့် တူညီသည့်ဒေသ အတွင်းမှ ၀န်ထမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ နှိုင်းယှဥ်ချက် များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့် ရာထူးအတွက် အချိန်ကာလတစ်ခုကြာအောင် လုပ်ကိုင်ဖူးကြောင်းဖြည့်စွက်ထား သူအားလုံးကို အမှန်တကယ်ဖြေဆိုသူ အဖြစ်သတ်မှတ် ၍ လစာ နှိုင်းယှဥ်ချက် နှင့်အတူ ပျှမ်းမျှပမာဏ နမူနာကိုပါ အခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ နမူနာ ကိုအခြားဖြေဆိုသူများ၏ အလုပ်ရာထူးနှင့် ဒေသ ဖြည့်စွက်မှုများဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖြေဆိုသူက ရွေးချယ်ထားသည့် အလုပ်ရာထူး အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဟု ဖြေဆိုလျှင် ထိုသူသည် အမှန်တကယ်ဖြေဆိုသူဖြစ်လာမည်မဟုတ်။
ဖြေဆိုသူတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အချက်အလက်များသည် သက်တမ်းတစ်နှစ်အထိရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဖြည့်သွင်းထား သည့် အချက်အလက်များနှင့်သက်ဆိုင်၍ မည်သည့် စိတ်အနှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာ ကိစ္စမှ ပေါ်ပေါက်လာမည်မဟုတ်ပါ။ လစာ စစ်တမ်း မှအချက်အလက်များအားလုံးသည် အမည်မသိ(အမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိ) ဖြေဆိုမှုများဖြစ်သည်။ အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အားလုံးသည် ဥရောပနိုင်ငံများ အထွေထွေအချက်အလက် ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဌာန်ချက် (GDPR) တွင်ပါ၀င်သည့် အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လစာ စစ်တမ်း သည် အသားတင်လစာ အချက်အလက်ကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုသူများ၏ လစာများ ကို အချိန်ပြည့် အလုပ်အတွက်ရသည့် လစာပမာဏအဖြစ် မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စစ်တမ်း သည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ် နေသူများ သို့မဟုတ် အခြားပုံစံဖြင့် လုပ်ကိုင်သူများအတွက် ဘောနပ်စ်များ ပါ၀င်မည်မဟုတ်ပါ။
အမှန်တကယ်တွက်ချက်မှုများ မပြုလုပ်မှီ နမူနာ အချက်အလက် ကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသည်။ ဖြေဆိုသူများ၏ အချက်အလက် သိသာကွာဟမှု ဖြည့်စွက်ချက်များကို ဖယ်ထုတ်သည်။ ဥပမာ - ၁၀၀၀ကျပ်/တစ်လ သို့မဟုတ် သန်း ၁၀၀/တစ်လ အချက်အလက်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၏ ဒုတိယအဆင့်မှာ ထပ်နေသည့်မေးခွန်းများနှင့် သိသာကွာဟမှု များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သိသာကွာဟမှုများ ကို တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ရာထူးများနှင့် ဒေသ ကိုအခြေခံ၍ သုံးသပ်သည် (မြို့တော်အတွင်းဒေသ၊ မြိုတော်ပြင်ပဒေသ)။ သိသာကွာဟသည့်အချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း (အချက်အလက် ဖြတ်တောက်ခြင်း) လုပ်ဆောင်မှုပုံစံ မှာ ဒေသအလိုက် ရာထူးတစ်ခုအတွက် အကြမ်းဖျင်း လစာဖြန့်၀ေမှုပုံစံ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို အခြေခံသည်။
အမေးအဖြေများမှ လစာ အချက်အလက် များတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုအရ ဖြတ်တောက်ခြင်းတွင် ပါ၀င်သူများ၏ အချက်အလက်ကို REGRESSION MODEL အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမှု တွင်ထည့်သွင်းမည်။
၃။ REGRESSION MODEL
လစာ စစ်တမ်း သည် စုစုပေါင်းနှင့် အခြေခံလစာကို အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံသည့် quantitative regression ဖြင့် တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်သည်။ အလုပ်ရာထူး၊ ဒေသ၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်စားများ၊ ပညာအရည်အချင်း၊ လေ့လာမှုနှင့် အသက်အရွယ် သည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါနည်းလမ်းက ဖြေဆိုသူ အနည်းငယ်သာရှိလျှင်လည်း လစာအချက်အလက်များကို လိုလားသည့် နမူနာ ပုံစံထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
REGRESSION MODEL က အချက်အလက် စုဆောင်းမှုအတွင် အနည်းဆုံးဖြေဆိုသူ ၂၀ရှိလျှင် လစာပမာဏကို ရာထူးအဆင့်အတန်းလိုက်တွက်ချက်နိုင်သည်။ ပုံသေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအရ ရာထူးတစ်ခုအတွက် ၁၂ လအတွင်း ဖြေဆိုထားသူများကို စစ်တမ်းပြုစုမည်ဖြစ်သော်လည်း အရေတွက်ပိုနည်းလျှင် ၂၄ လ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုနည်းလျှင် ၃၆ လအတွင်းဖြေဆိုထားသည့်အချက်အလက်များကိုစစ်တမ်းထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
REGRESSION MODEL မှထွက်ပေါ်သည့်ရလဒ်များသည် ဖော်ပြပါကုမ္ပဏီ အရွယ်စားကိုခွဲခြားသည် -
အသေးစား (၀န်ထမ်း ၅၀ ဦးအထိ)
အလယ်လတ် (၀န်ထမ်း ၅၁ - ၂၄၉ ဦးအထိ)
အကြီးစား (၀န်ထမ်း ၂၅၀ နှင့် အထက်)
အထက်တန်းပညာရေးထက်နိမ့်သော၊ အလယ်တန်း (သို့) သင်တန်းတစ်ခုခုပြီးသည့် ဖြေဆိုသူများပါ၀င်သည်
အထက်တန်းအောင်၊ အထက်တန်းထက်ကျော်လွန်သည့် ပညာရေးရှိသည့် ၀န်ထမ်းများပါ၀င်သည်
တက္ကသိုလ်ပညာရေး၊ တက္ကသိုလ်ပညာရေးတစ် ခုခုရှိထားသည့် ၀န်ထမ်းများပါ၀င်သည်
REGRESSION MODEL အတွင်း အလုပ်အတွေ့အကြုံအဆင့် သုံးခုပါ၀င်သည် -
အငယ်တန်း (၂နှစ် နှင့်အထက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ)
အလယ်တန်း (၃ - ၅ နှစ် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ)
အကြီးတန်း (၆နှစ် နှင့်အထက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ)
၄။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ရလဒ်မပြနိုင်ဘူးလဲ
REGRESSION MODEL ၀င်ခဲ့သည်မှအပ၊ အချို့အလုပ်ရာထူးများအတွက် အချက်အလက်များ ဖော်ပြမပေးနိုင် သည့် အခြေအနေလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဖြေဆိုသူအလွန်နည်းပါးသည့် အခါမျိုးတွင် ရလဒ် ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ REGRESSION MODEL ကခန့်မှန်းခြေ မရေရာသည့် လစာခန့်မှန်းချက်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ လစာ နှိုင်းယှဥ်မှု အခြေအနေမျိုးတွင် အသုံးပြုသူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုထားသည့် လစာညှိနှိုင်းမှု အကြံပြုလမ်းညွန်စာဆောင် ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူက လစာနှိုင်းယှဥ်ချက်ကို အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် အလိုအလျောက်ပေးပို့နိုင်ရန် ကြိုတင် တောင်းဆိုထားနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောလုပ်ဆောင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လစာ နှိုင်းယှဥ်ချက် လင့် ပေးပို့ရန် မိမိအီးမေးလိပ်စာကိုဖြည့်သွင်းပေးရန်သာဖြစ်သည်။
၅။ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အချက်အလက်ထုတ်ပေးခြင်း
MyLasar.com စစ်တမ်းမှ အခြေခံအချက်အလက် များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရာထူးတစ်ခုအတွက် ပျှမ်းမျှ လစာဖြစ်သည်။ လစာ နှိုင်းယှဥ်ချက် ဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကိုဖြည့် စွက်ပြီးသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသူသည် လစာနှိုင်းယှဥ်ချက် ကိုအခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (မျှော်မှန်းထားသည့် တစ်ခု (သို့) အစစ်မှန်တစ်ခု) ရလဒ်များကို ၀ဘ်ဆိုဒ် အတွင်းတိုက်ရိုက်ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
လုံလောက်သည့်အ ချက်အလက်များ ရပြီးသောအခါ လာရောက်ဖြေဆိုသူတိုင်းသည် ပိုမိုပြည့်စုံသောရလဒ်အဖြေ ကို ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး ပြည့်စုံသောရလဒ်အဖြေသုံးသပ်မှု မီဒီယမ်နှင့် အလုပ်အရည်အသွေးကို အခြေခံပြီးလစာများကို ပိုမိုအသေးစိတ်နှိုင်းယှဥ်ထားသော အဖြေဖြစ်သည်။ ထပ်တိုးအနေဖြင့် ၄င်းရလဒ်တွင် လစာသုံးသပ်ချက်ကို လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပညာအရည်အချင်း၊ ထပ်တိုး ငွေကြေးမဟုတ်သည့် အကျိုးခံစာခွင့်များကို ဒေသအလိုက်၊ ရာထူးတစ်ခုချင်းအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးမဟုတ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်း ဖြေဆိုထားသူ ၁၀ ဦး၏ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရွေးချယ်ထားသည့် နမူနာပုံစံတွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။
၀ယ်ယူရသည့် ရလဒ်ပုံစံတွင် လစာညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ရန် အကြံဥာဏ်များနှင့် ပဟေဠိအဖြေများ၊ ၀န်ထမ်းအတွက် SWOT ဆန်းစစ်မှုပုံစံများ အစရှိသည်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ၀င်လာမည်။ ထပ်တိုး ရလဒ်အဖြေ တစ်ခုလုံးတွင် စာမျက်နှာ ၂၀ ကျော်ပါ၀င်မည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းက အလုပ်အင်တာဗျူးသွားမည့်သူ (သို့) မန်နေဂျာနှင့် တွေ့ဆုံမည့်သူ အတွက် သင့်လျှော်သည့် လစာညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်ပေးပြီးသကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူသည် ၀ယ်ယူရသည့် ရလဒ်အဖြေကို သတ်မှတ်ထားသော အွန်လိုင်ငွေလွှဲစနစ် သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေလွှဲစနစ်အသုံးပြု၍ ၀ယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၀ယ်ယူထားသည့် တစ်ကိုယ်ရေလစာ သုံးသပ်မှုကို လာရောက်လည်ပတ်သူကဖြည့်သွင်းထားသည့် အီးမေး လိပ်စာ သို့ ငွေပေးခြေမှုပြုလုပ်သည်နှင့် ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
၆။ ကုမ္ပဏီများအတွက် အချက်အလက်ထုတ်ပေးခြင်း
သီးခြားအနေဖြင့် ကောပိုရိတ်အသုံးပြုသူများက ပရိုရလဒ်အဖြေ ကို စီမံနိုင်ပြီး၊ ၄င်းကို တောင်းခံထားသည့် အခြေခံ အချက်အလက် များဖြည့်သွင်းပြီး အွန်လိုင်း တွင်ပင်၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ပရိုရလဒ်အဖြေ သည် ရာထူးနှင့် ဒေသ သာမကဘဲ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ကုမ္ပဏီ အရွယ်စား (သို့) ပညာအရည်အချင်း စသည့်ကဏ္ဠများလည်းပါ၀င်သည်။ ပရိုရလဒ်အဖြေ သည် ရွေးချယ်ထားသည့် ရာထူးအလိုက် အကျိုးခံစားခွင့်များကို အကြမ်းဖျင်းခြုံငုံ ဖော်ပြမည်ဖြစ်သော်လည်း ထပ်တိုးရလဒ်အဖြေ နှင့်မတူပါ၊ ရလဒ်အဖြေနှစ်မျိုးလုံးသည် ရွေးချယ်ထားသည့် ခေါင်းစဥ်များကိုအခြေခံ၍ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်က အခြေခံနှင့် စုစုပေါင်းလစာကို ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဖက်တွင် ပျှမ်းမျှ ပမာဏကို အခြေခံကျသည့် ရာနှုန်းများနှင့်အတူ တွက်ချက်ဖော်ပြထားပါမည် -
၁။ ဒီဆိုင်လ် - ပေးထားသည့်ပမာဏထက်ပိုနည်း၍ရသည့် ၁၀% သော၀န်ထမ်းများ
၂။ ကွာတိုင်လ် - ပေးထားသည့် ပမာဏထက် ပိုနည်း၍ရသည့် ၂၅% သော၀န်ထမ်းများ
၃။ ကွာတိုင်လ် - ပမာဏထက် ပိုများ၍ ရသည့် ၂၅% သော၀န်ထမ်းများ
၉။ ဒီဆိုင်လ် - ပမာဏထက် ပိုများ၍ ရသည့် ၁၀% သော၀န်ထမ်းများ
အလုပ်စျေးကွက် မှအခြေအနေကိုလည်း ဖြေဆိုသူ၏ လစာရငွေရနှုန်း ဖြန့်၀ေမှုပုံစံဇယားတွင် တွက်ချက် ဖော်ပြနိုင်သည်။ အဆိုပါ ဇယားတွင် မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းသော၀န်ထမ်းများက ရွေးချယ်ထားသည့် နမူနာ အတွက် လစာရငွေရနှုန်း ဆယ်ယောက်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါ၀င်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်မည်။
ပရိုရလဒ်အဖြေ တွင် စုစုပေါင်းလစာ၏ အခြေခံရာနှုန်း ဖော်ပြချက်များကို လူတစ်ဦးစီအတွက် ရည်ညွန်း ဖော်ပြမှုများပါ၀င်သည် -
နှင့် အခြားအခြားသော ခေါင်းစဥ်တပ်နိုင်သည့် အချက်အလက်များ အလိုက်ဖော်ပြနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ပရိုရလဒ်အဖြေ တွင်ပါ၀င်မည့်ရလဒ်အားလုံးသည် REGRESSION MODEL မှရရှိသည်။ ဖြေဆိုသူများ ၏အခြေခံ အချက်အလက် များ၏အကူအညီဖြင့် ငွေကြေးမဟုတ်သည့် အကျိုးခံစားခွင့် များထုတ်ဖော်ရေးသားသည့်ဖြေဆိုသူများအတွက် ၀ေစုကို ကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါမည်။ ၄င်းသည် နမူနာ အတွင်းဖြေဆိုသူများ အနည်းဆုံးဆယ်ဦးရှိမှသာလျှင်ဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ထပ်တိုးလစာအစိတ်အပိုင်းများ၊ ၁၃ ခုမြောက်လစာ (ခရစ္စမတ်ဘောနပ်စ်)၊ နှစ်စဥ်အကျိုး ခံစားခွင့်ဘောနပ်စ် နှင့် ၄င်းထက်တိုးလစာအစိတ်အပိုင်းများက မည်သည့်အလယ်အလတ်နေရာတွင်ရှိသည် ကို ဖြေဆိုသူများ၏ ၀ေစုတွင် တစ်ပါတည်း အထက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်းအလားတူတွက်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ၄င်းတန်ဖိုးများသည် ရာထူး၊ ဒေသ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ ပညာရေးနှင့် ကုမ္ပဏီအရွယ်အစားတို့ကို အခြေခံ၍ ဖြေဆိုသူများ အနည်းဆုံး ၅ ဦးရှိလျှင် နမူနာ တွင်တွက်ချက်ဖော်ပြနိုင်သည်။
ပရိုရလဒ်အဖြေ ကိုအွန်လိုင်းတွင် ငွေပေးချေမှုစနစ် ဖြင့်၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ထိုသို့သောကိစ္စရပ်များတွင် PDF ရလဒ်ကို ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင်ဖြည့်စွက်ထားသည့် အီးမေးလိပ်စာသို့ အလိုအလျှောက်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ၀ယ်သူက ရလဒ်အဖြေကို ပြေစာနှင့်တကွတောင်းခံထားပါက ရလဒ်အဖြေထုတ်ရန်နှင့် ပြေစာပို့ပေးရန် ရုံးတက်ရက် နှစ်ရက်နှင့်အထက် ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
၇။ ကုမ္ပဏီများအတွက် အွန်လိုင်း ကိရိယာ
ကော်ပိုရိတ် ဖောက်သည်များအနေဖြင့် လစာကိရိယာ ကိုလည်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၄င်း၀န်ဆောင်မှုကို ၀ယ်ယူထားသည့် ဖောက်သည်များသည် စစ်တမ်း တွင်ပါ၀င်ထားသည့် အလုပ်ရာထူး များအားလုံးအတွက် လစာများကို တစ်နှစ်အတွင်း ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခု၀န်ဆောင်မှုကို ၀ယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ဖောက်သည်သည် နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် လစာအချက်အလက်များကို ကြည့်နိုင်မည့် အွန်လိုင်း ကိရိယာကို ရရှိမည်။
က) လစာ နှိုင်းယှဥ်ချက်
ခ) လစာ ဖော်ထုတ်ခြင်း
နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်မည့် ရလဒ်မှာ လစာ ပရိုရလဒ်အဖြေ တွင်ပါ၀င်မည့် ရလဒ်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လစာ နှိုင်းယှဥ် နေစဥ် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးစီအတွက် လစာများ ကိုမည်သို့ ပြုပြင်ပေးရမည်ကို စနစ်က တွက်ချက်အကြံပြုပေးမည်ဖြစ်သည်.။
ရလဒ်ကို နောက်ထပ် အဖွဲ့၀င်များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် သိမ်းထားနိုင်သလို PDF ဖိုင်အမျိုးအစားဖြင့်လည်း ထုတ်ယူသိမ်းထားနိုင်သည်။
အွန်လိုင်း ကိရိယာ၀ယ်ယူရန်အတွက် [email protected] ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၈။ ကုမ္ပဏီများအတွက် သီးခြားစမ်းစစ်မှုများ
လစာ စစ်တမ်း MyLasar.com က မတူညီသည့် ရွေးချယ်မှုအစီအစဥ်အလိုက် အချက်အလက် များထုတ်နိုင်အောင် ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများတွင်ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးတည့်ပါမည်။ စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များနှင့် ပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်သည့် စနစ်ကြောင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ပုံမှန်ထုတ်ပေးနေကျမဟုတ်သော ကွဲပြားသည့် စမ်းစစ်မှုများကိုလည်း ပြုပြင်၍ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စမ်းစစ်မှု အချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ရန်အတွက် [email protected] ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
MyLasar.com ၏များပြားသည့် အသုံးပြုသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက် ကောက်ခံမှုနည်းစနစ်ကြောင့် သီးခြား အဖွဲ့တစ်ခုခုကို ဦးတည်သည့် စျေးကွက် ဆန်းစစ်ချက်များကိုထုတ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်များက မိမိတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အခြားသူ ဖြင့် ရှုမြင်ရန်အခွင့်လမ်းရလာမည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးဗျူဟာများချမှတ်ရန် အသုံးချနိုင်မည့် အဖိုးတန်အချက်အလက်များကို အချိန်တိုအတွင်းရယူလိုက်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်များပိုမို သိရှိရန်အတွက် Paylabအချက်အလက် သုတေသန ကို၀င်ပါ။